ကြည်ဖြူသော ပြည်သူ ပြည်သားများနှင့် လိုက်လျောညီထွေသည့်အစိုးရနဲ့အတူ၊ တိုင်းပြည်နှင့်တိုင်းသူပြည်သားများအတွက် ကူညီ ကာကွယ်သည့်တပ်မတော်တစ်ရပ်ဖြစ်စေချင် - Yangon Nation News
ကြည်ဖြူသော ပြည်သူ ပြည်သားများနှင့် လိုက်လျောညီထွေသည့်အစိုးရနဲ့အတူ၊ တိုင်းပြည်နှင့်တိုင်းသူပြည်သားများအတွက် ကူညီ ကာကွယ်သည့်တပ်မတော်တစ်ရပ်ဖြစ်စေချင်
ကြည်ဖြူသော ပြည်သူ ပြည်သားများနှင့်
ကူညီ ကာကွယ်သည့်တပ်မတော်တစ်ရပ်ဖြစ်စေချင် –
ယခု(၂၀၂၀) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မိမိတို့ပြည်သူ ပြည်သားများအတွက်၊တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်၊ပယ်ဖျက်၊ဖြည့်စွက်ရမှာတွေများနေသော်လည်း၊ပြင်ဆင်ဘို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် လက်ရှိတည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံပါပြဌာန်းချက်များအတိုင်း မျှတစွာတိုက်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများနှင့်အညီ နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းရရှိနိုင်သော အခွင့်အရေးများဖြင့်
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကာ ပြည်သူအများစုကထောက်ခံမဲပေးရွေးချယ်ခံခဲ့ပြီး၊
ရိုးသား ယုံကြည်စွာ နာခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊
ပြည်သူတစ်ဦးချင်းမှသည် ပြည်သူအများအား မထေမဲ့မြင်၊ဗိုလ်ကျ စိုးမိုးပြောဆိုမူများကိုလည်းခေတ်ကာလအဆက်ဆက် ပြောဆို ပြုမူမှူများမရှိပါ၊
ပြည်သူသာအဓိကဟူသော မူဝါဒကိုသာ ကိုင်စွဲလာခဲ့ပါတယ်၊
ပြည်သူများ၏ အရေးကိစ္စများကို ဦးလည်မသုံ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ကို ပြည်သူ ပြည်သားများမှကာလအဆက်ဆက်မှာတွေ့ကြုံ၊သိမြင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်၊
ပြည်သူ ပြည်သားများနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ပင်ပန်း ဆင်းရဲ မူများစွာနဲ့
ဖိနှိပ်ခံ ကြရပေမယ်လို့ ခက်ခက်ခဲခဲဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ကောင်းများ ကိုရရှိလာစေရန် မိသားစုများစွာ၏ဘဝများကိုပေးဆပ် ရုန်းကန်ခဲ့ ကြပါတယ်၊ဆိုတာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများစွာနဲ့ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအများ၊
မိမိတို့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူ နိုင်ငံသားများက အသိအမှတ်ပြုလက်ခံတဲ့အပြင်၊
မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကရေစီခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးအတွက်ပေးဆပ်ခဲ့သူများကိုလည်း တတိယနိုင်ငံများက အလေးထား ဆက်ဆံပြီးအခြေချနေထိုင်ခွင့်များကိုလည်း ပေးခဲ့ကြပါတယ်၊ဆိုတာကိုလည်း အားလုံးက သိနေမြင်နေ ကြပါတယ်၊
ဒါကဘာကိုပြသလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ၏ ခေတ်စနစ် ပြောင်း တော်လှန်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမူ များကိုကမ္ဘာက လက်ခံအသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ ပြယုဂ် ဖြစ်ပါတယ်၊
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ပုံရိပ်ကောင်းများ၊စနစ်ပြောင်းတော်လှန်ရေးအားကောင်းမောင်းသန်မူများနဲ့အတူ လက်ရှိ မိမိတို့နိုင်ငံကို ယခင်ကာလများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်မည့် အခြေအနေများကို ဖန်တီး တည်ဆောက် ထူထောင်နေကြသည့် ဖြစ်စဉ် အခင်းအကျင်းများကို အကျည်းမတန်ကြပါစေနဲ့ဟုရေးသားတင်ပြလိုပါတယ်၊
လက်ရှိအစိုးရ ရွေးချယ်ခံ NLD အစိုးရ၏ တာဝန်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာသည် ပြည်သူလူထုအား တရားမျှတစွာအကာအကွယ်ပေးမည့် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ် ဘို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်၊
နိုင်ငံသားများကိုလည်း တန်းတူညီမျှတဲ့ အခွင့်အရေးများကိုရရှိစေပြီး၊
ထိုအခွင့်အလန်းများကိုလည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်၊
ဥပဒေ နှင့်အညီ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ တူညီသောအခွင့်အရေးများ ရရှိစေကြဖို့ကိုလည်းဖေါ် ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်၊
တပ်မတော်နှင့် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး ယန္တယားတစ်ရပ်လုံးသည် ရွေးချယ်ခံအုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဌိုင်ထဲ၌သာတည်ရှိစေရန် ဦးတည်ကြိုးစားနေရတဲ့အပြင်၊
နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ကို ပထဝီသဘော သဘာဝ အခြေအနေများ နှင့်ကိုက်ညီသော မဟာဗျူဟာအရ စစ်ရေးစွမ်းရည်ထက်မြက်၍ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်သော တပ်မတော်ဖြစ်လာရေး၊
ခေတ်မှီ၍ အဆင့်အတန်းမြင့်မားသည့် တပ်မတော်
ဖြစ်တည်ရေး နှင့် ပြည်သူလူထုက အားကိုးလေးစားချစ်ခင် ယုံကြည်တဲ့ နိုင်ငံ့ အင်စတီကျူးရှင်း တပ်မတော် ဖြစ်လာစေရေးကိုလည်း ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်၊
တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး အောက်မှာ ဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သော လွတ်လပ်သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့
ထိုသည်များက လက်ရှိ NLD အစိုးရ ကရည်မှန်းချက်များချပြီးမူဝါဒ အသွင်ဖြင့် ကြိုးစား ရုန်းကန် ဖေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်၊
ယခုတည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် တပ်မတော်အစိုးရမှ ဦးဆောင်၊ကြီးကြပ်ရေးဆွဲ ပြဌာန်းခဲ့ကာ အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်အပြင်၊
ပုဒ်မ(၄၄၃) နှင့်အညီ ယခင်တပ်မတော်အစိုးခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊
တပ်မတော်အစိုးရမှ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့သည့် ကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဦးသိန်းစိုး(စစ်ဗိုလ်ချုပ်) မှလက်မှတ်ထိုး ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊
NLD မှမတရားသဖြစ် တစ်ဖက်သတ်ဆန်ဆန်ရေးဆွဲ၊ပြဌာန်းအတည်ပြုခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုသည်ကို တပ်မတော်မှ တာဝန်ရှိသူများက သိစေဘို့လိုပါတယ်၊
ပုဒ်မ(၃၉၈) နဲ့အညီ ဖွဲ့စည်းခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည့် လွတ်လပ်သောလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ(၃၉၉) တွင်လည်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ တာဝန်များအား၊ ပုဒ်မခွဲ(၈) ခုဖြင့်ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊အခန်း(၇)၊တပ်မတော်အတွက် ပြဌာန်းထားသော၊ပုဒ်မ(၃၃၇) မှ(၃၄၄) အထိ ပုဒ်မပေါင်း(၈) ခုဖြင့်ပြဌာန်းအတည်ပြုထားပါတယ်၊
ပြည်ထောင်အဆင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို လွှမ်းမိုးနိုင်မည့် ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားမူအလျဉ်းမရှိတာကိုတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်၊
ပုဒ်မ(၂၀) မှာ ပ်ုဒမခွဲ(၆) ခုဖြင့်ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားသည်မှာ ၊
(င) ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မူမပြိုကွဲရေးနှင့် အချုပ်အခြာ အာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်တပ်မတော်တွင်အဓိကတာဝန်ရှိသည်၊
(စ) တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် အဓိကတာဝန်ရှိသည်၊
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီဖွဲ့စည်းထားသော၊လွတ်လပ်သော ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အား တစထက်တစ၊
အမျိုးမျိုးသော အပြောအဆို၊အကြောင်းအရာ လုပ်ရပ်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညီပါရဲ့လား ?
တိုင်းရင်းသားပြည်သူ အများစုက သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မူဖြင့်ဆန္ဒမဲပေးမူများအား ဟိုနားနည်းနည်း၊ဒီနားတစ်ဖုံ ဖြင့်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမူများသည်၊
မည်သူ၊မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏ လတ်တလောပြုမူ ပြောဆိုမူအရှိန်နဲ့များလုပ်ဆောင်
မည်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊အဖွဲ့အစည်းမှာတာဝန်ရှိပါသလဲ ?
လုပ်ရပ်အများစုသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် တပ်မတော်မှရယူထားသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ အချက်များဖြင့် ညီပါရဲ့လား ?
ယခုလိုကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်းရင်ဆိုင်နေကြရသည့် ကူးစက်မူမြန် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကာလတွင် မတန်မရာ၊မဖွယ်မရာဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံအား ပိုမိုရှုတ်ထွေးစေရန် လုပ်ဆောင်နေသည့် အသွင်သဏ္ဍာန်များဆီသို့ ဦးတည်နေကြတာကိုတွေ့နေရပါတယ်၊
တပ်မတော်သည် ရွေးချယ်ခံအစိုးရနှင့်အတူ တိုင်းပြည်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားများကို ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမှာမဟုတ်ပေဘူးလား ?
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများနဲ့အတူမိမိတို့နိုင်ငံ ကို ငြိမ်းချမ်းရေးရယူကြီပီးပိုမိုကောင်းမွန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် တည်ငြိမ်စေကာ
ဒီမိုကရေစ်ီစနစ်အခြေခိုင်၍ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးအဖြစ် တည်ဆောက်နေထိုင်ကြပါရန်အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေရန် ခေတ်အဆက်ဆက်၌ ပါဝင်လှူပ်ရှား ရုန်းကန်ခဲ့ကြသည့် အရပ်ရပ်သော ပြည်သူ ပြည်သားများ၊
ငယ်ရွယ်သူများ၊ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ အသိပညာ အတတ်ပညာရှင်များးနဲ့လတ်တလော ဖြစ်နေကြပါကုန်သော အခြေအနေများအား
ပြည်သူများကို အယူအဆ အတွေးခေါ် များကို ဖြန့်ဖြူးနေကြပါသော စာရေးဆရာကြီးများ၊သတင်းမီဒီယာများအား နိူးဆော်လိုက်ပါရစေ၊
သူတို့လုပ်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများဖြင့် အကောင်းဆုံးနဲ့လွတ်လပ်စွာဖြင့်စွမ်းဆောင်သွားကြတာကိုနေရာအများစုမှာတွေ့ရပါတယ်၊
နိုင်ငံတကာကလည်း တိကျမူရှိပြီး၊အတော်အတန်ကို လွတ်လပ်တရားမျှတမူများရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲဟု တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုကြတာကို အားလုံးသိနေကြရပါတယ်၊
အားနည်းမူအချို့ရှိနေသော်လည်း၊ဒါကလည်းနိင်ငံတိုင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲများတွင်ကြုံတွေ့နေကျ သဘောသဘာဝမျိုးလောက်ပါဘဲ၊
UEC က သူတို့၏ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်ကို
ပေးထားချက် ဥပဒေများဖြင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊
နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားများအတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနည်းနိူင်သမျှ နည်းစေမည့် အကြံကောင်းများ၊
နည်းလမ်းများကိုသာ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊အစိုးရအပါအဝင်တပ်မတော်မအားဝေဘန် အကြံညာဏ်များကို ထိထိရောက် ငြင်ငြင်သာသာပေးကြခြင်းက မိမိတို့နိုင်ငံနဲ့မိမိတို့ ပြည်သူများကို ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊
အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ကာကွယ်ရေးအတွက်အရေးကြီးသည့် လက်နက်ကိုင် အင်စတီကျူးရှင်း ဖြစ်သည့် တပ်မတော်တာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့်တို့မှ သတိထား ဆင်ခြင် ပြောဆိုဘို့ လိုအပ်ပါတယ်၊
ဟု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ(၃၃၇) ဖွင့်ဆိုချက်နဲ့အညီ တိုင်းပြည်၏ လက်နက်ကိုင် အင်စတီကျူးရှင်းဖြစ်သည့် တပ်မတော်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ထမ်းဆောင်နေသော အဆင့်ဆင့်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် မိမိ၏ ပြောဆိုမူကြောင့်တိုင်းပြည်၌ မလိုလားအပ်သောနိုင်ငံရေးပြသနာများ၊တရားဥပဒေစိုးမိုးမူများကိုထိခိုက်ပြီး၊အားနည်းလာကာတည်ငြိမ်မူများကိုပျက်စီးစေသော၊
စည်းလုံးညီညွတ်မူများကို ယို့ယွင်းလာနိုင်စေသော အပြောအဆို လုပ်ရပ်များ လျှော့ချနိုင်ကြရပါမယ်၊
အလွယ်ကူဆုံးသည် ဆဲဆို ရိုင်းပြခြင်းဖြစ်ပြီး၊လိမ္မာ ပါးနပ်ကာ သည်းခံ၍လူကြီးလူကောင်းဆန်နိူင်မူက ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်၊
ထိုကဲ့သို့ကြိုးစားအားထုတ် စွမ်းဆောင်နိုင်မူသည် မိမိတိုင်းပြည်၊မိမိနိုင်ငံသားများအတွက်
သည်းခံ စည်းလုံး ညီညွတ်မူများကို ပို၍ပို၍ ကြိုးစား အားထုတ် စွမ်းဆောင်ကြဖို့၊
မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် မိမိတို့နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများစွာအတွက် နှလုံးမူကာ ရှေ့ဆက်ကြပါစို့၊
ဟူ၍ ရေးသားနိုးဆော် တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
NLD နှင့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ ပထမဆုံး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ပြောကြား